Doorashada Maraykanka:Hillary Cilinton oo aqbashay Musharaxnimada Xilka Madaxweynaha. - Wargeyska Faafiye
Doorashada Maraykanka:Hillary Cilinton oo aqbashay Musharaxnimada Xilka Madaxweynaha.
Hillary Clinton ayaa xalay si rasmi ah u aqbashay in ay noqoto musharraxa xisbiga Demoqraaddig u matali doona Doorashada Maraykanka ee dhici doonta bisha November sanadkan.
Mrs Hillary Clinton waxay tilmaantay in Wadanka Mareykanka uu yahay Dal hadda lagu xisaabtamo, iyadoo ku baaqeysa in la midoobo, waxayna hadaladeeda ku durtay Niinka ay is hayaan ee musharaxa Jamhuuriga, Donald Trump.
Mrs Cilintyon waxay sheegtay in Wadanka Mareykanka oo si wada jir ah u shaqeeya ay mustaqbal wanaagsan u noqon karaa qofkastaa, waxayna u mahadcelisay taageerayaasheeda iyo kuwii musharrixii ay ku tartameen doorashada hoose ee Dimuquraadiga, Bernie Sanders.
Mrs Hillary Cilinton waa qofkii dumar ahaa ee ugu horreeyay ee u tartanta xilka Madaxwayninimada Dalka Maraykanka.
Madaxwyanaha xilkka ka sii dagaya ee Dalka Maraykanka Mr Barak Obama ayaa ku baaqay in la doorto Hillary Cilinton, isagoo ku macneeyay in aysan jirin Haween iyo Rag kaga haboon Xilka Madaxtinimada Dalka Maraykanka, ayna mudan tahay in ay xafiiska kala wareeto.
Filed in: .Warka, Editorial Tags: doorashada maraykanka
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsSt. Paul murder suspect fresh out of jail for bus driver beating,Cumar Buraale Axmed oo noqday Madaxweynihii 3-aad ee Jubbooyinka & Gedo.QM oo balan qaaday taageero ammaanka ah .The latest from across the continent as we look ahead to the fourth Week of Football.Howlgal dad lagu qabqabtay, B/weyne